thinzar's blog: Chinese-style steamed fish
အင်တာနက်ထဲမှာ “Chinese-style steamed fish” recipe ဆိုပြီး ရှာလိုက်တော့ တော်တော်များများ တွေ့လာတယ်။ အဲတာတွေထဲက ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ အချက်လေးတွေ ရွေးပြီး စိတ်ကြိုက်လုပ်လိုက်တာ တော်တော်တော့ စားကောင်းသွားတယ်။ (ပဲငံပြာရည် နည်းနည်းများသွားတာကလွဲရင်)။ ငါးက ပေါင်းအိုးထဲ မဆန့်လို့ ခေါင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်။
ငါးတစ်ကောင် (ပုံထဲက Ikan Siakap။ မြန်မာလို ကကတစ် ငါးလို့ခေါ်တာထင်တယ်။)
ဆီ ၂ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင် တစ်ဝက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
ကျန်နံနံပင် တစ်ဝက်ကို ငါးအပေါ်မှ အုပ်ရန် ဖယ်ထားပါ။
စပါးလင် ၂တက်ကို ဓါးပြားရိုက်ထားပါ။
ငါးကို ဓားဖြင့်မွမ်းပြီး ဆားနယ်၍ နာရီဝက်ခန်၌ထားပါ။ ပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်ပေါ်မှာ ခုနက ပါးပါးလှီးထားတဲ့ အဆာ(ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်) အနည်းငယ်ကိုခင်း၊ တစ်ချို့ တစ်ဝက် နဲ့ စပါးလင် ကို ငါးဝမ်းဗိုက်အတွင်းသွတ်ပြီး ၁၀မိနစ်ခန့် ပေါင်းပါတယ်။ ငါးပေါင်းတာ ကျက်သွားပြီဆိုရင် ငါးပေါင်းကနေ ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေကို သွန်လိုက်ပြီး ငါးကို ပန်းကန်တစ်ချပ်မှာ ထည့်ထားပါ။
ဆီလက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းခန့်ကို ပူလာအောင် တည်ပြီး ဂျင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူ အနည်းငယ်ကို စက္ကန့် ၂၀ ခန့် အပူပေးပြီး ငါးအပေါ်ကို လောင်းချလိုက်ပါ။
ထို့နောက် ရေအေးဖြင့်ဖျော်ထားသော ကော်မှုန့် ၂ဇွန်းခန်၌ကို ပွက်အောင် တည်ပါ။ ပွက်လာလျှင် ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ နှမ်းဆီ အနည်းငယ်၊ ကျန်နေသော အဆာ (ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ငရုတ်သီး)နှင့် စပါးလင်တို့ကို ထည့်၍ ပွက်လာလျှင် ငါးအပေါ်သို့ လောင်းချလိုက်ပါ။
(သဉ္ဇာ့အမေကတော့ စားရတာ ပေါ့လို့ဆိုပြီး သံပုရာသီး ညှစ်ပါတယ်။ Original Recipe ထဲမှာတော့ သံပုရာသီး ညှစ်တဲ့ အဆင့် မပါဘူး။)
လုပ်ရတာ မခက်တော့ အရသာရှိတဲ့ ငါးပေါင်းတစ်ခွက် ထွက်လာမှာပါ။
၁။ ငါးပေါင်းလို့ထွက်လာတဲ့အရည်ကို ပြန်မသုံးပါနဲ့။ လူတော်တော်များများက ငါးပေါင်းရည်မှာ အရသာနဲ့အာဟာရဓါတ်တွေ ပါတယ်လို့ ယူဆကြပေမယ့် အမှန်မှာ ငါးပေါင်းရည်ဟာ အနံ့အနည်းငယ် ညှီတဲ့အတွက် ငါးပေါင်းရဲ့ အရသာကို ပျက်စေပါတယ်။
၂။ ပဲငံပြာရည်အကြည်ရဲ့ အရသာကို အနှစ်အတွက် အဓိက သုံးပါတယ်။
၃။ လူအစုက ဆီထည့်လေ့မရှိပေမယ့် ဆီသတ်ပြီး လောင်းချလိုက်တဲ့ ဆီပူပူဟာ ငါးပေါင်းရဲ့ အနံ့အရသာကို ပိုပြီး ပြည့်စုံစေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ref: Steamed Fish Recipe
ပဲငံပြာရည်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အမြဲသုံးနေတာဘဲ အရသာရှိသလိုဘဲ။ ဒီက ပဲငံပြာရည်တွေက အချိုများလွန်းတယ်။ ဒီ Lee Kum Kee တံဆိပ်တော့ မဆိုးဘူး။ အရင်နှစ်အထိ မြန်မာပြည်ပြန်တိုင်း ပဲငံပြာရည် သယ်ရတာ အလုပ်တစ်ခု :D
(အရင်ပို့စ်ကို NHM Writer နဲ့ ရေးပေမယ့် ခုပို့စ်တော့ လက်ကွက်ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး Keyman နဲ့ ရိုက်ကြည့်တယ်။ ရရစ် အရင်ရေးပြီးမှ အက္ခရာ ရေးတာ အကျင့်ပါနေတော့ စာရေးရတာ နည်းနည်းထောက်တယ်။ ပြီးတော့ ယပလက်ရယ် ဂငယ် ရယ် ဝလုံးရယ် ခဏခဏ ပြန်ရှာရတာကလွဲရင် ကျန်တာ အားလုံး အဆင်ပြေတယ်။ တစ်ပုဒ်လောက် ရေးပြီးတာနဲ့ ကီးဘုတ်ကို တော်တော်ကြိုက်သွားတယ်။)
ဒီပို႔စ္မွာ သံုးတ့ဲ ျမန္မာသရီးဖြန္႔က ယူနီကုဒ္န႔ဲ နည္းနည္းဆင္တယ္။ ဖတ္လုိ႔ရတယ္။ ေအာက္ကျမစ္ေတြက ေနရာမေျပာင္းေတာ့သလုိပဲ။
(ေန႔လည္က ျမန္မာသရီးဖြန္႔ အသစ္ ေျပာင္းထည့္လုိက္လုိ႔လား မသိဘူး။)
သဥၨာ ကိုေတာ့ သဉ္ဇာ ဆုိၿပီးေတာ့ ဖစ္႐ိုးမွာ ျပေနတုန္း...။ :P
6/1/11 8:25 PM
Ko Boyz>> ဟုတ်တယ်ကိုဘွိုက်ဇ်..မြန်မာ၃ဖောင့် နောက်ဆုံးဗားရှင်း ထည့်လိုက်ရင် အောက်ကမြစ်တွေ နေရာ မှန်သွားတယ်။ နာမည်ကြတော့ Firefox နဲ့ ကြည့်ရင် မှန်တယ်။ ဂူဂယ်လ်ခရုမ်းနဲ့ဆိုရင် အမှန်ပြဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိပါဘူး။
6/1/11 9:06 PM
ဒုကၡပါပဲ... ၿဂိဳဟ္သား ဘာသာစကား နဲ႕မေရးပါနဲ႕ဗ်ိဳ႕ :P
6/1/11 9:13 PM
Ko AATO>> Please just download Myanmar3 font from here, and copy paste it under Control Panel->Fonts. You don't need to change any settings. You'll be able to read other blogs written in unicodes as well.. It won't affect your Zawgyi at all.. Believe me :-)
6/1/11 10:09 PM
ေကအယ္လာတုန္းက ထမင္းဖိတ္ေကြ်းဖို႔ မေျပာလိုက္ရတာ နာတာပဲ။ အခုၾကံဳတုန္း ေျပာရဦးမယ္ ေကအယ္လ္လာတုန္းက အခ်ိန္လုျပီး ေျပးလႊားေနရလို႔ ဖုန္းမဆက္လိုက္ရဘူး။ ေနာက္တစ္ေခါက္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ထဲ လာမွဆက္သြယ္လိုက္မယ္။
6/1/11 10:28 PM
အာ..ကိုဒီဘီ.. ယူနီကုဒ်နဲ့ မန့်လေ.. :) အင်းလေ.. ၂ရက်ထဲလာတာကိုး။ တော်တော်ပြေးလိုက်ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ ထမင်းကတော့ စားရဲရင် ကျွေးရဲတယ်ပေါ့။ စိတ်ကူးပေါက်မှ ဟင်းချက်တာ။ ချက်တိုင်းလည်း ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ :D နောက်မှ တွေ့တာပေါ့နော်။
6/1/11 10:52 PM
7/1/11 12:14 AM
Awesome Geek said...
အန်.. အဲဒိငါးကြီးကို တစ်ယောက်တည်း စားပလိုက်တာလား
7/1/11 8:44 AM
ယူနီကုတ်နဲ့ မန့်ဖို့ပဲဗျ ညက ကျွန်တော့ အမျိုးသမီးရဲ့ ကွန်ပျူတာကနေ မန့်လိုက်တာမို့လို့။ သူ့စက်ထဲ ကီးဘုတ်မရှိသေးလို့။
7/1/11 10:25 AM
Ma Shinlay>> cool! :)
Handsome Geek>> အင်းလေ။ ညနေစာ အတွက်တောင် မကျန်ဘူး။ တစ်ထိုင်တည်း ကုန်သွားတာ။ စားလို့ကောင်းပါ့..
ကိုဒီဘီ>> အဲသဟာကြောင့်ကိုး။ :)
7/1/11 12:08 PM
Still unable to read it even after installing mm3 font that you've shared in one of the above comments. :-(
7/1/11 1:38 PM
Evy>> After installing mm3 font, did u try to reload the page? if the font still didn't render correctly, can you pls try to follow some steps written at the sidebar of Ko ZT blog?
Thanks for reading my blog. :)
7/1/11 3:44 PM
ငါးေလး ေပါင္းျပထားတာ ေကာင္းလိုက္တာ အရသာ အေတာ္ရွိမဲ႔ပံု
ေကာ္မန္႔ေတြ ဖတ္ရတာလည္း အရသာ အေတာ္စံုတယ္ ဘာသာစကားစံုနဲ႔ ေရာေမႊထားသလိုဘဲ ဟိဟိ..
ဒီေဖာင္႔ေလးကေတာ႔ ၾကည္႔ရတာ ရုပ္မဆိုးလွဘူးေနာ္.. လက္ခံလို႔ရတယ္.. ဦးနီထက္ေတာ႔လွတယ္.. း)
7/1/11 11:32 PM
မချော>> ငါးက ခေါင်းဖြတ်ထားရတော့ နည်းနည်း ရုပ်ဆိုသွားတယ်။ အမ ဖတ်လို့ ရသွားပြီလား။ ဒါလည်း ဦးနီဘဲ။ ဦးနီဆိုတာ အဖေကြီးပေါ့။ သူက ဖောင့်မဟုတ်ဘူး။ သူ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေကမှ ဖောင့်တွေပေါ့။ (မြန်မာ၃၊ မိုင်မြန်မာ၊ သံလွင်၊ ပိတောက်၊ ပုရပိုက်၊ ယွန်းချို) ခုက မြန်မာ၃နဲ့ရေးတာ။ အမဆီမှာတော့ ဘာနဲ့ပေါ်လဲ မသိဘူး။ အရွယ်နည်းနည်းချဲ့လိုက်တော့ ကြည့်လို့နည်းနည်းလှသွားတယ်။ ကောမန့်က ဖောင့်တွေကတော့ နောက်မှ ပြန်ညှိလိုက်မယ်။ ခုတော့ တိုင်းရင်းသာပေါင်းစုံ စာဖတ်ရတယ်လို့ဘဲ သဘောထားပါနော်။ :)
8/1/11 12:29 AM
မသင္ဇာေရ... လာလည္သြားပါတယ္ရွင့္။ ပာီးးး ဓာတ္ပုံေတြပဲ ႀကည္႕သြားတာ။ စာက ယူနီကုတ္ ဆိုေတာ့ ဖတ္လို႕ မရဘူး။ ျမန္မာ ၃ ကို ေဒါင္းလုတ္လိုက္ရင္ တကယ္ ေဇာ္ဂ်ီကို ဘာမွ မထိခိုက္ပါဘူးေနာ္။ မသင္ဇာ ေရးထားတာ ဖတ္လည္း ဖတ္ခ်င္တယ္။ ေဒါင္းလုတ္ရမွာလည္း ခပ္ေႀကာက္ေႀကာက္ရယ္... ကိုယ္က သိပ္မကြ်မ္းက်င္ေတာ့လည္း း)
8/1/11 11:19 PM
Thet Oo said...
20/1/11 4:21 AM
ယူနီကုတ်နဲ့ မန့်ကြည့်တာပါ။ ယူနီကုတ်သုံးတော့ စာရိုက်ရတာလည်း ပိုအဆင်ပြေလာပါတယ်။
20/1/11 4:24 AM
My blog and myanmar unicode issue
Converting blog to Myanmar Unicode